Kismaayo News » Cabsi loo baajiyay ciyaartii Jubbaland iyo Galmudug
Kn: Ciyaartii galabta dhexmari lahayd ciyaartoyda Jubbaland iyo kuwa Galmudug ayaa si aan horay loogu talogalin loo baajiyay kadib markii shirkii golaha wasiirada ee maanta lagu sheegay khatar dhinaca amniga.
Qadar yar kadib markii shirku soo dhamaaday ayaa labada kooxood lagu wargaliyay inaysan suuro gal ahayn inay maanta ciyaari dhex marto, balse loo soo sheegi doono xiliga ay dib u ciyaari doonaan.
Cabsida amaan ayaa timid kadib markii uu saaka naftii halige isku qarxiyay kulyadda tababarka ciidamada Booliska ee Sareeye Guuto Kaahiye, qaraxaasi oo galaaftay nafta 15 askri halka ay ku dhaawacmeen tobaneeyo kale.
Lama sheegin inay baaqan doonto iyo inkale ciyaarta la filaayo inay baritoole dhex marto Puntland iyo Koonfur Galbeed. Alshabaab ayaa kordhiyay weerarrada ismiidaaminta ah ee ay ka fulinayaan goobaha bulshadu isugu timaaddo si ay argagax ugu abuuraan bulshada, dawladduna ilaa iyo hadda way ku guulaysan la,dahay inay xakamayso oo nabad ku soo dabaasho caasimadda dalka.